सोलुमा बलबहादुर केसीको एकल राज तोड्लान त सुरवीरले ?
विशेष सोलुमा बलबहादुर केसीको एकल राज तोड्लान त सुरवीरले ?
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर ७, २०७४ २०:०३:००
सुवास दर्नाल/उज्यालो ।
काठमाडौं, मंसिर ७ – २०६४ सालको चुनाव बाहेक नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर केसीले पराजित हुनु परेको छैन । बहुदलीय व्यवस्थापछिको पहिलो आम चुनावमा सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका केसीले त्यसपछिका मध्यावधि चुनाव २०५१ र २०५६ सालमा समेत सोलुखुम्बुबाट लगातार जित हासिल गर्नुभयो ।
तीनपटक मन्त्री पनि बन्नुभएको छ । तर २०६४ सालको चुनावमा भने उहाँ पराजित हुनुभयो । यो नै बलबहादुरको पहिलो हार थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि कांग्रेसबाट निरन्तर टिकट पाएका बलबहादुरले २०७० सालको चुनावमा पनि टिकट पाउनुभयो र विजयी पनि हुनुभयो । आउँदो चुनावमा पनि उहाँले नै टिकट पाउनुभएको छ । तर यस पटक बलबहादुरको प्रतिस्पर्धा पहिलो पटक टिकट पाएका माओवादीका हेमकुमार राई सुरवीरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
लगातार जित्दै आएका बलबहादुरलाई विगतका चुनाव जति सजिलो छैन यस पटक । छुट्टाकछुट्टै लड्दै आएका एमाले र माओवादी एक छन् । स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले दुधकुण्ड नगरपालिका मात्रै जितेको छ । आठ वटामध्ये सातवटा स्थानीय तहमा एमाले र माओवादी विजयी भएका छन् । २०७० सालको चुनावमा पनि एमाले–माओवादीको मत कांग्रेसको भन्दा बढी छ । वाम गठबन्धनको तर्फबाट भुपाल राई ‘सुरवीर’ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । बहुदलपछि निरन्तर भिड्दै र एउटाबाहेक सबै चुनाव जित्दै आएका बलबहादुरलाई रोक्ने सुरमा हुनुहुन्छ ।
वाम गठबन्धनले विगतका चुनावमा जति नै आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा पार्न सके बलबहादुरको राज तोडिने छ । होइन भने फेरि पनि बलबहादुर नै विजयी हुने छन् । तीन पटक मन्त्री भैसकेका बलबहादुरको कामको मुल्याकंन पनि यसै चुनावले गर्नेछ ।
को हुन् बलबहादुर केसी ?
नेपाली कांग्रेसका केन्द्र्रीय सदस्य बलबहादुर केसी २०१० साल साउन २ गते सोलुखुम्बुको सल्यान –३, मा जन्मिनु भएको हो । केसीले विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।
२०२७ सालमा नेविसंघ, महेन्द्ररत्न क्याम्पसको सभापति पद सम्हालेका केसी २०४० देखि ४४ सालसम्म नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ नेपाली कांग्रेस, सोलुखुम्बुको सचिव पनि हुनुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थापछिको पहिलो आम चुनावमा सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका केसीले त्यसपछिका मध्यावधि चुनाव २०५१ र २०५६ सालमा समेत सोलुखुम्बुबाट लगातार जित हासिल गर्नुभयो । उहाँ तीनपटक मन्त्री पनि बन्नुभएको छ । २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेका केसी २०५६ सालमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री र २०५८ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभयो ।
२०४९ सालदेखि हालसम्म पनि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यमा रहेका केसीले २०४२ सालमा सत्याग्रह आन्दोलनको संयोजक भएर काम गर्नुभएको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौंको चावहिल क्षेत्रको इन्चार्जको भूमिका निर्वा गरेका केसी पटक पटक गरी ७ वर्ष जेल बस्नुभएको छ ।
हेमकुमार राई (सुरवीर)
सोलुखुम्बुबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हेमकुमार राईको जन्म नेचा सल्यान गाउँपालिका –४, मा भएको हो । २०४० साल पुस १५ गते जन्मिएका राईले १२ कक्षासम्म सिन्धुली उच्च माविमा पढ्नुभयो ।
अहिले सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका – ४, बस्ने राईले २०५६ सालमा तत्कालीन माओवादीको सदस्यता लिनुभएको हो । अहिले उहाँ माओवादी केन्द्र सोलुखुम्बुको जिल्ला इञ्चार्ज हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नुभएको हो ।